> Resource > Lugood > Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada Khasaaray ka ah ee kaabta File Lugood
Aad soo kaban karaa xiriirada lumay ka ah Lugood gurmad file?
Waxaa si weyn loo yaqaan in Lugood ay abuuri karaan file ah oo gurmad u ah qalab macruufka ah marka la synced. Si kastaba ha ahaatee, aawadood oo ah ammaanka, Apple ma ogola qof si ay u helaan xogta iyo aragtida in gurmad ah, haddii aad gebi celin doonaa iPhone, iPad ama iPod taabto. Taasi waa in la yidhaahdo, waxaad u baahan tahay in la siiyo ilaa dhan xogta jirta on qalab aad. Maxaa dhacaya haddii aad laga badiyay kaliya a xiriir dhowr ah qalab aad iyo aad doonayso in aan si overwrite xogta jira on qalab aad? Ma jiraa hab in aad soo kaban karto, xiriirada ka gurmad Lugood oo aan dib u soo celinta?
Sida muuqata, ay jawaabta haa tahay, laakiin aad u baahan tahay si ay u leedahay Lugood gurmad shawladda, kaas oo kaa caawin kara inay soo saaro content oo dhan ee file gurmad ah oo aad u eegista soo kaban karto, wax kasta oo aad rabto in aad ka. On Akhri oo raac tallaabooyinka hoose si aad u soo ceshano xiriirada aad lumay gurmad Lugood faylka.
Talaabooyinka ee xiriirada sanaanayaa kaga imaanayo Lugood ah
Waxa aad u baahan tahay marka hore: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) .
Dooro mid ka mid xaq ah ee nidaamka qalliinka your computer iyo soo bixi version maxkamad hoose hadda.
Tani macruufka software kabashada xogta gelineya inaad soo saaro oo dhan Lugood files gurmad u iPhone, iPad iyo iPod taabto. Nidaamka oo dhan waxaad qaadataa kaliya labo talaabo, oo aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta ku gurmad ah ka hor inta lagu badbaadinayo in your computer. Next, aynu qaadan version Windows ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka sida tusaale.
Tallaabada 1. Run barnaamijka iyo dooran file gurmad ah
First of dhan, ordo barnaamijka on your computer marka aad soo bixi oo ku rakiban. Markaas guji soo kabsado Lugood ee kaabta File on sare ee suuqa kala bilowga barnaamijka. Isla markiiba, aad arki doonaa barnaamijka ee suuqa kala show sida soo socota. Waxaa oo dhan gurmad Lugood files on your computer ayaa lagu helay oo soo bandhigay liiska.
Haddii aad synced ka badan hal qalab macruufka kombiyuutarka, waxaad ka heli doontaa dhawr files gurmad waxaa. Dooro mid ka mid ah meesha aad ku socoto inuu ka soo kabsado xiriirada, oo guji Start Scan si ay u extact.
Tallaabada 2. Check oo soo kabsado xiriirada ka gurmad Lugood ah
Skaanka qaadi maayo aad u dheer. In dhowr ilbiriqsi, waxaad natiijo scan sida hoos ku qoran barnaamijka heli doonaa.
In natiijada scan, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta laga helay gurmad ah, oo ay ku jiraan xiriiro, fariimaha, sawiro, note, oo sidaas. Si aad ku eegaan xiriir ah, waxaad riixi kartaa shayga Xiriirada dhinaca bidix ee suuqa. Markaas waxaad ka akhrisan kartaa magacyada, shirkadaha, telefoon lambarada iyo cinwaanada emailka waxaa ka mid ahaa in la xiriiro. Iyaga Hubi mid mid sax iyo waxyaabaha aad rabto in aad. Waxaad iyaga ku badbaadin kartaa in aad computer adigoo riixaya Ladnaansho button ee geeska hoose ee saxda ah.